कथा: निमोठिएको गुलाब - २ - Everest Dainik - News from Nepal
कथा: निमोठिएको गुलाब – २
"गल्ती समयको होइन, मेरै हुनुपर्छ । पहिलोपटक तिमी हराउँदै तिमीप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने मैले त्यो नै ढुलो भूल भयो मेरो ।"
दिन झन-झन् बिक्षिप्त बन्दै थियो । मनमा उनको यादसिबाय केही थिएन । निद्राले त आँखाबाट बसाइँ सरिसकेको थियो । दिन त जसोतसो काट्थें तर रात कटाउने साथी आँसु मात्रै थियो । आँसुले सिरानी भिजाएरै सारा रात कट्थें । मोबाइलको घण्टी बज्नासाथ उनको याद झन बल्झिएर आउँथ्यो । आउने प्रत्येक कलमा उनैको बोली चाहन्थ्यो मनले । तर उनको नाम लेखेको कल आएन । अहँ आउँदै आएन ।
आजकल मेरो दिनचार्य पुरै फेरिएको थियो । साथीहरूसितको साथ छुटेको महिनौ भैसकेको थियो । मनिसको आगमन र बोली सुन्दा पनि रिसको पारो चढेर ह्वात्तै माथि पुग्थ्यो । मेरो यो पारा देखेर मेरो साथी ऐन निकै चिन्तित बनेको थियो । दिनौं जसो फोन गर्थ्यो उसले, घुम्न जाने फिल्म हेर्ने जाने कुरा गर्थ्यो । तर म बहाना बनएरै टार्थें ।
एकदिन ऊ मेरै रुममा आएर कराउन थाल्यो, “यदि मलाई बचपनदेखिको साथी ठान्छस् भने मसँग हिंड् नत्र मसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन ।”
उसको यो कुराले मलाई तर्सायो । म नचाहेरै भए पनि सहमति जनाए । उसले मलाई घुमाउनको लागि सहर्षथारा लिएर गयो । त्यहाँ हाम्रा अरु साथीहरू पनिरहेछन् – नरेस, अमोल र समिर पनि । ऐनसँग ती सथिको परिचय मैले नै गराएको थिएँ । दोस्रो वर्ष चल्दै गर्दा ऐन भने मन्यजमेन्ट पढ्थ्यो । साथीहरूसँगको त्यो बसाइले अलिकति सहज भयो । त्यो दिन कमसेकम उसको याद त्यति आएन । म अलिकति एकोहोरिएको थाहा पाउनसाथ साथीहरू बहाना बनाइहाल्थे हँसाउने । त्यस रात अलि सजिलै सुते जस्तो अनुभव भयो । हाम्रो भेटघाटको क्रम फेरि बाक्लियो । साँझमा चोकको पसलमा बसेर चिया पिउने क्रम फेरि सुरु भयो ।
यसै बीचमा उसको खबर बुझ्न उसका सबै साथीलाई कल गरे । नबिना, सरिता, अञ्जली, मनिषा कोही बाँकी राखेन । तर उनीहरूको जवाफ नि उस्तै थियो,”हाम्रो फोन नि उठाउदिन । न त उसले नै गर्छे छुटेपछि ।”
म सोच्थें – ऊ कसरी एक्लिएर बाँच्न सक्छे ? म सगँ रिसाए पनि उसका साथीसित त कन्ट्याक्टमा हुनुपर्ने ।
पीडै-पीडाका बीच दिन ब्यथित हुँदै गए । समयले उसको यादको घाउ बिस्तारै पुर्न थाल्दै थियो । म पनि आफ्न दैनिकक्रममा फर्कने थाले नतिजा आयो प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण पनि भएछु । घरबाट जागिर खोज्नको लागि प्रेसर आउन थाल्यो ।
धेरै ठाउँको कोसिसपछि एक ठाउमा जगिर को लागि अफर आयो । मन निकै खुसी भयो । घरमा फोन गरेर सुनाएँ,”बुबा जागिरको लागि कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप भन्ने NGOबाट फोन आयो, भोलि पोखरा जानुपर्ने भयो अन्तर्बार्ताको लागि ।”
भोलिपल्ट लागें पोखरातिर । मेरो साथी समिर उतै थियो । उसकै रूममा बस्ने कुरा भयो । निकै रमाइलो भयो त्यो साँझ हामी लेकसाइडमा गयौं । साँच्चिकैको फरक अनुभूति छुट्टै किसिमको आनन्द त्यो साझको, लाईभ म्युजिकसँग रमाउनुको ।
बारमै हुँदा फेरि उसको कमिको आभास भयो । उसको साथ त्यहाँ भएको भए त्यो साझ अँझ स्वर्णिम हुन्त्यो होला । तर के गर्नु ऊ निष्ठुरी बनेर मबाट टाढा बनिसकेकी थिई । मन बुझाउने कोसिस गरे । साथीले बाटोमा फर्कदै गर्दा भन्यो तलाई बीच-बीचमा भावनाको यादले झस्कायो है । मैले टाउको मात्रै हल्लाएँ ।
अर्को दिन अन्तर्वार्ता थियो । मनमा अलि अलि डर पनि थियो । लागे कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्को अफिस नयाँबाटोतिर । अन्तर्बार्ता सफल भयो, जागिर बाग्लुङ्मै हुने भयो । म मुस्कान सहित बाहिरिएँ । पहिलो फोन बुबालाई नै गरें । तर मन त यो कुरा सुनाउने अरुलाई नै थियो । तर विवश थिए म सम्झेरै मात्र चित्त बुझाउन । त्यो रात झन मस्ती मै बित्यो । पुरानै ठाउँ लेकसाईड अनि साथी समिर ।
जागिर बाग्लुङ्मै भएसि अप यहाँको बसाइ अनिश्चित थियो । जुन ठाउमा पुग्थे जहाँ उनीसँग भेट हुन्थे मलाई गिज्याइरहेको भान मलाई पर्थ्यो । दिनभर अफिसको काममा ब्यस्त साझको साथीहरूसितको बसाइ दिन जनतन कटेकै थिए । तर रात आफ्नै ब्यथा बोकेर बित्थे । जागिरकै मेलोमा सानो कामकोलागि बुर्तिबाङ्ग जानुपर्ने भयो ।
बाग्लुङ् बजारदेखि ८ घण्टे यात्रा त्यो पनि कच्चि सडक । साँझ अबेर झन्डै ५ बजे म त्यहाँ आइपुगे र बसको लागि होटेल खोज्न थलें । त्यहाँ म ३ दिन बस्नु थियो स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत एच आई भि एड्सको जानकारी प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलाउन । कार्यक्रमस्थल भएको दलित बस्तीमा मलाई निकै पीडा भो त्यहाँको बस्तुस्थिति देख्दाँ । जहाँ बालबालिका एकसरो कपडामा थिए । जुन वर्षौं नपखालिएका झै देखिन्थे । सरसफाइ पनि निकै कमजोर, बच्चाहरू अनियन्त्रित रुपमा सौच गर्दै थिए, सबैतिर भाँडा अनियन्त्रित देखिन्थे । घरहरू पोत्नै बिर्सिएकाझैं वर्षौ । खानेपानीको अवस्था त झन कुरै गर्न नमिल्ने । सबै घरमा चुलो बलिरहेको थियो । तर आगोभन्दा बढी धुवाकोमुस्लो देखिन्थे । त्यसैमा झन चुरोटको धुवा थप्दै अर्धबैंशे महिलाहरू । मन भित्रैबाट रोयो । अनुभूति भो एच् आईभि एड्सको शिक्षा होइन सरसफाइको लागि शिक्षा अवाश्यकता थियो । तर पनि म बाध्य थिएँ सोही कार्यक्रम चलाउन । मैले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन् गरी दुवै विषय मिसाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरे । त्यो बस्तीका केही तस्वीर मेरो क्यामेरामा कैद थिए । म त्यहाको बसाई टुङ्गाउदै फेरि बाग्लुङ् फर्किएँ ।
म अफिस फर्किएर आफ्नो फिल्ड प्रतिवेदन तयार पार्दै थिएँ । मेरो मोबाइलमा घण्टी बज्यो । फर्केर हेरें त्यो कल भावनाको नामबाट आएको थियो । म फेरि एकपटक झस्किएँ, मन असन्तुलित बन्यो । मेरो मनमा रिसको पारो चढेर निकै माथि पुग्यो । फोन काटिदिएँ । फेरि कल आयो । मन नलागि नलागि उठाएँ, तर केही बोलिन । ऊ एकोहोरो भनिरहेकी थिई,”के छ हजुरको खबर? के गर्दै हुनुहुन्छ?”
याे पनि पढ्नुस रुखको कथा
मलाई बोल्न मनै लागेन, फोन काटिदिएँ । उसको कल लगातर आएको थियो तर म आफ्नो कामतिर लागे झै गरे । २१ औ कल पछि एउटा टेक्स्ट् आयो,”प्लिज् मेरो कल उठाउन ल ।”
मैले रिप्लाई गरें,”अब के नै बाँकी छ र बोल्नु ? म काममा ब्यस्त छु ।”
उसले फेरि म्यासेज गरी,”म तिमीलाई साँझ कल गर्छु love u ।”
मैले म्यसेजको प्रतिकृया दिनूनपर्ने ठाने । म आफ्नो काममा मन लागाउन सकिन । फेरि उसले एकपटक मेरो मनलाई बिथोल्न सफल भई । मेरो अनुहारको चमक हरायो मन अँध्यारो भयो । मैले मेरो साथी ऐनलाई कल गरे आजको कुरा सुनाएँ । ऐनले उसको कुरामा ध्यान नदिन र मनलाई ढुक्क् बनाउन भन्यो । तर मेरो मन उसको कलले पगाल्न थालिसकेका थियो । घडीले ५ बजाउन नपाउँदै फोनमा उसैका कल आउन सुरु भयो । मेरो नियमित कामहरू सकिन अँझै १ घण्टा जति लाग्थ्यो, फोन काटिदिएँ । बारबार कल आएसि म अलि काम गर्न असजिलो महसुस भयो । मेरो बोसको ध्यान मैतिर परेको देखें। म्यासेज गरें I’m still on office call me after 1 hour ।
कोठामा पुग्दा म निकै उदास बनें । मनभरि ऊप्रतिको आक्रोश भरिएर आयो । मनले भन्यो,”उसलाई एक पटकमै कल नउठ्दा यति पीडा हुने म यत्रा दिन कसरी काटें होला । ऊ किन त्यो सोच्दिन ? आज म उसलाई आफ्नो नहुनुको पीडा बोध गराउँछु ।”
उसको त्यो कलले मेरो बिर्सिएको अतित सम्झ्यायो, खाटो बसेको घाउको खाटो उक्कायो । पीडामै रम्न सिकेको मन फेरि भक्कानिने बनायो । वास्तवमै उसले फेरि मलाई पुरानै मोडमा फर्काई हजारौ घुम्ती घुमाएर । उसको कल आउने क्रम फेरि सुरु हुन थाल्यो । म झन् उत्तेजित् बन्दै गए रिसले । १० पटकको लगतार्को कलपछि फेरि म्यासेजको टोन बज्यो । म्यासेज उसैको थियो ऊ लेख्दै थिई,”तिमी के भयौ ? किन मलाई तड्पाउदैछौ ?”
मलाई झन रिस उठ्यो, लेखें,”तिमी यसलाई तड्पाउने भन्छौ है ? अनि तिम्रो आजसम्मको व्यवाहारले मलाई के गर्‍यो तिमीलाई हेक्कासम्म छ ?”
फेरि उसको कल आयो । रिसकै झोकमा उठाएँ अनि भनें,”तिमीले मलाई रुवाएर अँझै पुगेको छैन है भावना ?”
ऊ सुँक्कसुँक्क रोई मात्र । म झन् क्रोधित बन्दै गए,”जो स्वार्थी बन्दै तड्पाउन खोज्छ उसकै आँसु धेरै ? तिमी मैले नउठाएका १० कल सम्झेर रुन्छ्यौ, म के गरौं भावना तिमीले नउठाएका ती हजारौ कल अनि अनुत्तरित सयौँ म्यासेजको बदलामा ?”
मेरो मनमा रिसको आगो शान्त भएन म के-के बोल्न पुगेछु मलाई नै पत्तो भएन। उसले फोन काटिदिई । केही बेर त यसै रिसाएरै बसें तर उसको त्यो बोलीले मनलाई यति पगालिसकेको थियो कि म उसले गर्ने कलको प्रतिक्षामा बसिरहे ।
घन्टा बिते, तर उसको कल आएन । म आफै कल गर्न तयार भएँ । अघिसम्म रिसको आगोमा जलेको मन एकै छिनमा यति पग्लियो जुन बर्णन गर्न नि असमर्थ थिएँ । मैले फोन लागाएँ, एक घण्टी जान नपाउँदै उसले कल उठाई र रुन्चे स्वरमा भनी,”अँझै केही भन्न बाँकी छ कि ?”
मैले शान्त हुँदै भनें,”भन्न र सोध्न त यति कुरा छन् कि भावना तिमी रातभर जवाफ दिएरै बसे पनि सक्दैनौ ।”
ऊ सुँक्क-सुँक्क गर्दै थिई, सोधेँ,”तिमी यत्रो समय कहाँ हराएको ?”
ऊ नाजवाफ बसिरही । मैले फेरि भनें,”म तिम्रो लायक कहिल्यै बनिन है भावना !”
उसले रुँदै उत्तर दिई,”यी सब कुरा म भेटेरै भन्छु केही दिन पर्ख ।”
“भावना, मेरो धैर्यताको बाँध टुटिसक्यो । अब म केही धैर्य गर्न नि सक्दैन । मेरो मुटु यति छिया-छिया बनिसक्यो कि अब टाल्ने कुनै चिज नै छैन होला यो धर्तीमा । तिमी किन बार-बार मलाई टुक्राउँछौ ? तिमीले दिएका सब चोटहरू म अचानो बनी सधैं सहेरै बसौं ।”
ऊ केही बोलिन, रोई मात्र रही । मैले अघि भनें,”भावना, रुनु सम्स्याको समधान होइन । सायद गल्ती मेरो नै थियो होला तिमीलाई यति धेरै माया गर्नु, तिमीप्रति यो प्रेम दर्शाउनु ।”
“गल्ती न तिम्रो थियो न मेरो । यो सबै समयको खेल रहेछ,” ऊ यत्ति बोली ।
“गल्ती समयको होइन, मेरै हुनुपर्छ । पहिलोपटक तिमी हराउँदै तिमीप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने मैले त्यो नै ढुलो भूल भयो मेरो ।”
ऊ सरी भन्दै थिई, म अँझै उसँग निहु खोजिरहेको थिएँ । यतिकैमा उसले भनी,”मप्रति यति धेरै नै गुनासो रहेछ त म तिम्रो जीवनबाट टाढा बनिदिउँला ।”
“नजिक त महिना दिनलाई मात्रै हुन्छौ भावना, बाँकी दिन त ताढा नै छौं । बस् तिमीलाई सम्झेरै काट्य त छु नि !”
ऊ फेरि रुन थाली । जब ऊ रुन सुरु गर्थी, मेरो मन पग्लिहाल्थ्यो ।
“समस्या खासमा के हो भावना ? तिम्रो मनको यथार्थ के छ प्लिज भन । तिमी आफै भन यो तड्पाइ कहिलेसम्मको ?”
“म तिमीलाई छिट्टै भेट्छु, अनि भन्छु ।” ऊ अरु केही बोलिन ।
“कहिले भेट्छौ त ?”
“खोइ थाहा छैन तर छिट्टै ।”
“फेरि हराउने त हौली नि तिमी ।”
ऊ केही बोलिन एकछिन अनि भनी,”म कहिल्यै हराउने छैन अब ।”
“यो कुरा पनि पहिलेका झैं नबनून है भावना ।”
“गुड नाइट्, टेक् केयर्” भन्दै उसले फोन राखी ।
“गुड नाईट्,” मैले यति भने ।
साँझ-बिहान ऊसँगको कुराकानी यसरी नै बितिरहेका थिए । म अफिसबाट निस्कनै लगेको थिएँ, उसले म्यासेज् गरी,”अनलाइन आऊ” भन्दै । म एकछिन रोकिएँ, जाऊँ या अफिस नै बसेर ऊसँग कुरा गरौं भनेर । मेरो मनले अफिस छाड्ने छाँट नै गरेन । फेरि फर्किएँ र बसें आफ्नो कुर्चीमा । अनि खोले फेसबुक ।
फेसबुक खोल्न नपाउदै उसकै म्यासेजको बिप् बज्यो । लेखें,”किन अनलाइन बोलाको ?”
“तिमीसँग बोल्न नि !” उसले सिधा उत्तर दिई ।
“अनि साँझ बोलेर हुन्नथ्यो ?”
“नाइँ, विशेष कुरा छ के !”
“के कुरा ?” म अलि उत्सुक भएँ ।
उसले भनी,”म फेरि बाग्लुङ् आउँदै छु ।”
म झस्किएँ,”अब फेरि तड्पाउने भयौ ?”
उसले हाँस्दै भनी,”किन तड्पाउनु र तिमीलाई ?”
“कहिले पो नतड्पाई राख्या छौ र भावना ?”
उसले फेरि 😛 लेखेर पठाई ।
“तिमी आज निकै खुसी छौ हो ?”
“किन नहुनु त ! फेरि जो बाग्लुङ् आउँदै छु, फेरि त्यो तिम्रो साथ मिल्दै छ ।”
म केही बोलेन एक्छिन । उतैबाट म्यासेज आयो,”म कहिले आऊँ ?”
“आउने तिमी हो तिम्रो मर्जी ।”
“मप्रतिको रिस अँझै मरेको छैन कि कसो हँ ?”
“किन मार्नु छ र ?”
“म तिमीलाई भेटेसि सब कुरा फेरिदिन्छु ।”
“हुन्छ भावना सब कुरा फेर्दिनु सक्छौ भने यो तिमीलाई माया गर्ने मन अनि मुटु पनि साटिदिनु फेरिदिनु ।”
उसले फेरि रिसाएको स्टिकर पठाई । मैले जवाफ दिएँ,”म यही दिनको प्रतिक्षामा छु तिम्रो मुखबाट ती अनुत्तरित सयौं प्रश्नको जवाफ माग्ने ।”
“सब प्रश्नको जवाफ पर्सी पाउनेछौ, म पर्सी आउँछु ।”
हुन्छ भन्नुबाहेक मसँग अरु कुनै शब्द थिएन ।
अन्य रात जस्तो लागेन । आजको रात केही समयपछि फेरि रात अनिद्रामै बित्ने निश्चित थियो । किन किन फेरि उनको तस्वीर अगाडि नाचिरहयो । न त कुनै गम थियो न त कुनै खुसी नै । पर्सी भेट्ने कुराले बस मनमा एउटा अनौठो भाव पैदा भयो, छटपटी पनि सँगसँगै पैदा भयो । रात घडीको सुई हेर्दा हेर्दै कट्यो । त्यो दिन अफिस बिदा थियो निद्रा नपरेकोले होला बिहान १० बजेसम्म बिस्तारामै पल्टिरहे उठ्ने कुनै जागर थिएन । ११ बज्नै लाग्द थियो ऐनले फोन गरेर घुम्न जाने भन्न थाल्यो । मैले मुड नभएको कुरा गरें । तर ऊ अड्डी कसेरै बस्यो,”हामी सब तयार छौं, तँलाई के भा’को हँ ? कि फेरि उसैको लागि हामीलाई बिर्सन थालिस् ?”
यो कुराले मलाई झस्कायो । भावनासँग कुरा हुना थालेपछि हाम्रो भेट्घाट पुन: पातलिएको थियो । म अवाक भएँ, उसले फेरि भन्यो,”यार् हिड न जाऊ के !”
म बाध्य भएँ,”जाने चाहिं कहाँ ?”
“अग्लो पुल हेर्न ग्यादि ।”
“ह्या नाजाऊ भो ।”
मेरो जवाफ् सुनेपछि उसले रिसाउँदै भन्यो,”तँ यस्तै होस्, त्यसको एक कल के आको थियो हामीलाई बाल नि दिन छाडिस् ।”
“सरी यार्, म भर्खर् उठ्या, ढिला हुन्छ होला । तिमीहरू जाऊ ल ।”
उसले म नगए नजाने अड्डि कस्न थलेसि म बाध्य मे स्वीकार्न उसको कुरा ।
लामो समय पछिको साथीहरूसँगको बसाई निकै रमाइलो रह्यो । मैले मेरा साथीको अनुहार यति फुर्तिलो पहिले देखेको थिइन । साथीहरूले पुलसँगैको रेस्ट्रुरेन्टमा बसेर खाजा खाने निर्णय गरे । साथीहरू खाजाभन्दा बढी झ्याप हुने तरखरमा थिए । उनीहरूले खाजाभन्दा पहिले ड्रिन्क्सको मेन्यु पल्टाउन थाले । म भने चुपचाप उनीहरूलाई हेरिरहेको थिए । साथीहरूले भोड्का पिउने निर्णय गरे तर मेरो भने मुड थिएन । मैले नपिउने कुरा दर्साएँ, तर उनीहरू ५ जनाकोसामु के चल्थ्यो र मेरो । झण्डै २ घण्टाको बसाइपछि हामी त्यहाँबाट बाहिरियौ ।
रुममा पुग्दा रात परिसकेको थियो । रुम नपुग्दै फोन आयो उसको । मैले गिजाउदै भनें,”आज म ससुराली गाउँ आ’को थिएँ नि, तिमीलाई त देखिन नि !”
उसले हाँस्दै भनी,”आज ससुराली पो रे ?”
“हो त !” मेरो जवाफ सुनेपछि ऊ एकछिन मज्जाले हाँसी ।
“कहाँ गको थियौ र ?”
“ससुराली गाउँ क्या ?”
“ह्या, भन न कहाँ गा’को ?”
“ग्याग्दी घुम्न साथीहरूसित ।”
“म त्यही थिएँ नि फुपूकोमा ।”
मैले हाँस्दै भने,”आज दिउँसो नै फोन भा’को भए फुपूसासूको दर्शन हुने रहेछ ।”
“हुन्थ्यो नि आजकल मेरो याद आउने भए पो कल गर्थ्यौ ।”
“के साथीहरूसँग घुम्न जाँदा तिमीसित फोन गरेरै बसौ ?”
“हिजो त केही भनेनौ त ?”
“आज एक्कासि बनाएछन् के साथीले योजना । तर आज यत्रो मौका फुत्कियो फुपूसासूसित तिम्रो हात मागेर आउनु पर्ने ।”
“मर्ने मन छ कि क्या हो मलाई ?”
“एकदिन त थाहा हुनु नै छ, आजै भन्दिन्थे नि ।”
“बदमास, म भोलि आउँछु, गुड् नाइट् लभ यु,” भन्दै फोन राखी ।
दिनभरको हिडाई र साझको मस्तिले रात सजिलै बित्यो । बिहान उठ्दा ८ बजेछ, म झस्किएँ । अफिसको आलिकति काम बाँकी थियो । हतार हतार त्यो सक्ने कोसिस गरे । १० बजेतिर उसको म्यासेज आयो,”साँझ ५ बजेसम्म बाग्लुङ् आउछु भेट्ने है” भन्दै ।
“हस्” भनी रिप्लाइदिएँ अनि लागे अफिसतिर ।
अफिसको दैनिकी अलि व्यस्त थियो, कामहरू धेरै थुप्रिएका थिए । अँझै अफिस पुग्दा हेड अफिसको अनुगमन् भन्ने मेलले झन् झस्कायो । दिनभर फुर्सद भएन । ४ बजेतिर उसको कल आयो तर उठाउन सक्ने अवस्था थिएन । म काममै व्यस्त भएँ । ५:३० बजे आफिसबाट निस्कदा मोबाइलमा ४५ कल र ४ ओटा म्यासेज् सबै उसैको थिएँ । म झस्किएँ, उसको अन्तिम म्यासेजले झन् झस्कायो,”तिम्रो माया कतिरहेछ देखाइहाल्यौ नि ।”
चार पटकसम्म कल गर्द उसले उठाइन, पाचौ कलमा बल्ल उठ्यो । ऊ रिसाउँदै भन्न थाली,”के गर्न फोन गरेको ?”
“के गर्न रे, के भयो ? म अफिसमा बिजी थिएँ । आज अनुगमन् आको थियो ।”
“बाहना हो तिम्रो,” ऊ अँझै रिसाउदै थिई ।
कुरा मोड्ने प्रयास गरें,”कहाँ भेट्ने त ?”
ऊ “पर्‍या छैन भेट्न किन भेट्नु पर्‍यो ?” भन्दै झर्कन थाली ।
“के हो, आज घरदेखि नै धम्काउने योजना बनाएर आको हो र ?”
याे पनि पढ्नुस प्रेम, एक सपना र ऊ
“म कहाँ आऊ ?” फेरि सोधें ।
“पर्दैन । म साथीकोमा छु ।”
“भोलि मलाई भेट्ने फुर्सद छ ? भोलि नि त्यही अफिस छ ।”
म केही बोलिन । केही छिन फोनमै सुन्यता छायो ।
“आऊ के साँझ एकछिन । अनि जाउली,” बस यति भने ।
अन्त्यमा ऊ सहमत भई ऊ । पुरानै ठाउ हल्लनचोकमा भेट्ने कुरो भयो । मनमा अलि कौतुहलता पैदा भयो । झन्डै ६ महिनापछि उसको र मेरो फेरि भेट हुँदै थियो । एक पटक मनले मारिसकेको हाम्रो प्रेम फेरि मनको कुनाबाट टुसाउँदै थियो । मनले खै अर्कै आभास गर्दै थियो ।
जब ऊ मेरो अगाडि देखिई, म झस्किएँ । उसको पहिरन पहिले पहिले जस्तो थिएन । उसका आँखामा पहिले झै गाजल थिएन न त ओठमा लिपिस्टिक नै पोतिएको थियो । ऊ दुब्लाएर सानी बने झैं देखिएकी थिई । ऊ सदा कुर्था सरवालमा सजिएकी थिई । म उसको त्यो रुप देखेर मेरो मन अत्तालियो । ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै झ्याम्मै अङगालोमा बाँधिई । म उस्को त्यो बानीले अलि अचम्मित परें । उसले पहिले त्यस्तो व्यवाहर कहिल्यै देखाएकी थिएन ।
ऊ रुन थाली । मैले उसको कानमा अरुले देखिरहेको र शान्त हुन भने । ऊ एक्कासि मेरो अङगालोबाट पर भागी । उसले कतै एकान्त ठाउँमा जाने इच्छा व्यक्त गरी, हामी लाग्यो रुद्रेपिपलतिर ।
बाटोमा जादै गर्दा ऊ निकै मौन थिई । उसका आँखाबाट आँसु झरिरहेको स्पष्ट देखियो ।
“के भयो भावना ? तिमी किन रुँदैछौ ?”
“केही भएको छैन,” उसले जवाफ दिई ।
“नत्र तिम्रो आँखामा आँसु किन बग्दैछ ?”
जब हामी ब्याडमिन्टन् कवर्डहल सँगैको चौतारीमा बस्यौं । उसको रुवाई चर्को भयो । म उसलाई सम्हाल्न असफल भएँ । उसको आँखाको आँसु देखेर मेरो आँखा रसाउन थाले । बस मैले उसले झै देखाएर जाहेर गरेको थिइन । ऊ फेरि मेरो अङ्गालोमा बाधिई र किस गर्न थाली ।
मै झन अन्योल्मा परें उसको त्यो प्रबृति देखेर । ऊ शान्त हुन झन्डै १० मिनेट लाग्यो । उसका रसाएका आँखा म आफैंले पुछिदिएँ । मन नलाई नलाई सोधें,”तिमी यत्रो समय कहाँ हराएको ?”
“म बाध्य थिएँ । घरमा बुबाले हाम्रो कुरा थाहा भएपछि सब कुरा बिग्रियो । मलाई कसैको फोन उठाउन दिनुहुदैनथ्यो, न त बोल्न नै । एउटा केटी भएर बाँच्न कति गारो हुन्छ । त्यो पनि मेरोजस्तो अबुझ परिवारमा तिमी बुझ्दैनौ ।”
मैले अरु धेरै कुरा खोतल्न आवश्यक ठानिन,”अनि बाग्लुङ् ?”
“मेरो फुपूले यहाँ कतै जागिर मिलाइदिन्छु र मेरो सामुमा राख्छु भनेसि पठाउनु भा’को ।”
“ठिक छ नि । अब सब पुरानै जस्तै हुन्छ,” मैले भन्ने अरु केही भेटिन ।
ऊ फेरि मबिना एक्लिएर बाँच्न नसक्ने भन्दै रुन थाली ।
“म पनि तिमीबिना बाँच्न कहाँ सक्छु र भावना !”
योभन्दा बढी त के भन्न सक्थे र ? उसका निर्दोष आँखाले मेरो अनुहार हेरिरहन्थे । तर मेरो आँखाले उसको अनुहारमा पहिलेको जस्तो खुसी कतै भेटिन । झन्डै एक घण्टाको बसाइपछि हामी छुटिने निधो गर्‍यौं । मैले उसलाई मेरो कोठातिर हुँदै बिदा गर्ने विचार गरे । ऊ हुन्छ भन्दै हिंडी । मैले फेरि उसका हात समाउदै हिड्ने मौका पाए लाग्यो । उसको यो साथभन्दा ठुलो कुरो केही छैन यो धर्तीमा । उसको मेरो भेट नभएको कुनै साँझ थिएन । पहिले जस्तै गरी साँझमा पानीपुरी खाने क्रम फेरि सुरु भयो । हाम्रो सामिप्यता निकै नजिक बन्यो सायद । यसलाई रोक्ने कुनै बार नै थिएन शारीरिक सुखसम्मका सुखहरू साटिइसकेका थिए ।
समय यसरी नै बित्दै थियो । एकदिन ऊ घर जाने भन्दै मेरो कोठामा आई । एक घण्टा जति बसेर गई । छुट्ने बेला उसका आँखा रसाएका मैले स्पष्टै देखे । त्यो बेला उसको मनमा मप्रतिको प्यार छर्लङ्ग भयो । मनमा अलिकति भए नि सन्तोष पैदा भयो ।
जब ऊ घर गई, फेरि ऊ बिलाई । न उसको फोन आयो न उसको म्यसेज । फोन गर्दा फोन स्विच अफ भन्थ्यो । आयो त केबल उसको याद मात्रै । मेरा दिन फेरि अँधेरिन थाले । न त जगिरको लागि आफिस जनै मन लग्न थाल्यो । अफिस गए पनि काममा कुनै दिल लाग्दैनथ्यो । झन्डै १५ दिनपछि उसको म्यासेज आयो । जब त्यो म्यासेज हेरें धर्ती नै फाटे झैं भयो, आकास सबै आफैंमाथि खसे झैं भयो । मुटुमा Heart Attack को दुखाई भए झैं लाग्यो । म्यासेजमा लेखिएको थियो i am getting married ।
मेरो आसाका सबै कुरा हुरिले उडाएर लग्यो । ऊ अर्कैको बेहुली बन्दै थिई । मैले म्यासेजको उत्तर दिने कुनौ शब्द भेटिन। बस आँखामा आँसुका धारा बग्न थाले । मेरा ती गन्तव्य सबै ढोङ्ग्रा बने । उसको त्यो म्यासेजले मलाई के बनायो त्यो आफैलाई पत्तो भएन । उसको यादले उज्यालो मन नपर्ने बनायो । मेरो दैनिक जीवनचक्र सब परिवर्तन् भयो । उसको यादमा बस्नु दिन रात रुनु । त्योभन्दा बढी मेरो दैनिकी केही थिएन । न त आफिस जन्न्थे न कोही साथी सँग भेटघाट नै हुन्थ्यो । बस म फेरि डिप्रेसनको सिकार बन्न पुगे ।
उसले बिहे त गरी । तर मेरा सब आशा तथा गन्तव्य टुटेर गए । म गन्तव्यबिहीन भए । उसको यादमा दिनरात पागल बन्ने, बस् पागल-प्रेमी, बनें ।
निमोठिएको गुलाब (भाग १)
(कथामा उल्लेखित पात्र तथा स्थान काल्पनिक हुन् । कसैको जीवनसँग मेल खाएमा केबल संयोग मात्रै हुनेछ।)